Brain aaladaha lagu caawiyaa Paralysed Man - Rule News
Brain aaladaha lagu caawiyaa Paralysed Man
tallaalka neural Pioneering u ogolaanaya chip ee maskaxda u soo dirto signalka in muruqyada ee curcurka iyo farihiisa, taas oo suurto gal ah in mari kaar iyo ciyaaro Gitaarka Hero
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “galaha Brain caawisaa nin curyaan hanto qayb ka mid ah uu gacanta” waxaa qoray Sample editor Science Ian, waayo theguardian.com on Wednesday 13 April 2016 17.00 UTC
Nin 24-sano jir ah oo lagu curyaan shil lix sano ka hor ayaa dib u qabsadeen qaar ka mid ah gacanta isticmaalaya galaha ah in dita signallo ka maskaxda si toos ah muruqyada ee ahaa in gacanta iyo faraha.
Yaqaano sida tallaalka a neural, galaha u ogolaanaya Ian Burkhart inay mari credit card, ciyaaro kulanka video ah, gitaarka Hero, oo wuxuu oofin falalka sida soo gaaray dhalo iyo waxyaabaha ku shubtay, haysta telefoon si dhegtiisa, iyo kareyso koob. Isagu waa qofka ugu horeeya in ay ka faa'iideystaan ​​technology.
Burkhart, ka Dublin, Ohio, ahayd fasax ah xeebta si ay ugu dabaal dhamaadka sannadkiisii ​​ugu horeysay ee jaamacad markii uu u Dhumban galay ruxruxo ahaan in isaga reebtay gal sandbar qarsoon. Waxa uu ahaa 19, aad u madax banaan, oo marna loo arkaa in shil noocan ah isaga hoos dhufan laga yaabaa.
ciidanka ee saameynta wareegtay Burkhart qoorta heer C5 ah. Waxa uu weli gacmihiisa yaabaa inay u dhaqaaqdo ilaa xad, laakiin gacmaha iyo lugaha ahaayeen waxtar lahayn. Friends isaga baxay biyaha iyo sara kiciyey, qayladii. Lamafilaan, dab damiye off-waajib ah ahayd xeebta oo loo yaqaan ambalaasta.
Burkhart lahaa therapy dhaawac ah la koox dhakhtarro ee Ohio State University. Laga soo bilaabo bilowga, wuxuu ahaa ku rajo weyn in horumarka technology caafimaadka hagaajin lahaa tayada nolosha. Waxa uu u sheegay kooxda uu xiiseynayay in cilmi-baarista iyo diyaar u ah inay ka qayb qaataan tijaabooyin tiknolojiyada cusub.
The cilmi Ohio gacmahooda helay on tallaalka a neural horumariyo by hay'ad samafal ah oo lagu magacaabo Battelle oo waxay bixiyeen Burkhart fursad u leedahay in maqaar-galaha lagu rakibay. "Taasi waxay ahayd su'aal million dollar ah: ha aad rabto in aad leedahay qaliin maskaxda ama wax aan laga yaabaa in aad ka faa'iideysan. Waxaa jira waxyaabo badan oo ah halisaha,"Ayuu yiri Burkhart. "Waxaa hubaal ahayd wax aan lahaa si ay u eegaan, waayo, wakhti dheer qaar ka mid ah. Laakiin ka dib markii uu kulan la qaatay dhammaan kooxda iyo qof walba oo ku lug leh, Waan ogaa waxaan ku jiray gacmo fiican. "
Waxa uu ka hor tagtay oo waxay qalliin taaghayn rakibay dulqaaday computer yar galay kiliyaha motor uu maskaxda. Halkan, chip ee soo gaaray signallo koronto ka qayb ka mid ah kiliyaha motor oo koontaroosha dhaq-gacanta.
gacmo A si gaar ah ka dhigay on dhudhun helo calaamadaha ka qori yar ee kiliyaha motor of maskaxda ah oo awood u dhaqdhaqaaqa gacanta. Sawir: Jaamacadda Ohio State Wexner Medical Center / Batelle
fuzz hawshani maskaxda waxaa la quudiyey galay computer ah oo beddelay digir korontada in garab xadhig dhaawacmay laf iyo xirmaan darafta ah in Burkhart xirtaa uu dhudhun. From waxaa, 130 electrodes diri digir ah maqaarka muruqyada ka hooseeya, halkaas oo ay ka taliyaan curcurka iyo dhaqdhaqaaqa farta xataa gaar ah. The qaabka of signalada waxaa soco in ay soo saaraan dhaqdhaqaaqa Burkhart u maleeyo ku saabsan samaynta.
wakhti ayay ku qaadatay in ay bartaan sida loo isticmaalo qalabka. In ka badan 15 bilood, Burkhart kor u qaatay saddex kalfadhi oo toddobaadkii barashada sida loo xakameeyo dhaqdhaqaaqiisa gacanta.
"Markii hore waxaan samayn lahaa kulan gaaban oo waxaan dareemayaa lahaa maskax dhiban daallanna oo daallan, sida inaan ku jirtay imtixaanka lix ama toddoba saacadood ah. Waayo, 19 sano, Noloshaydana waan u qaatay siiyo: Waxaan qabaa Farahaygana guuraan. Laakiin leh dhaqanka iyo aad u badan waxay noqotay inta badan ka sahlan. Waa nooca labaad. "
"Markii ugu horeysay ee aan gacantayda dhaqaaqay, Waxaan u lahaa in flicker rajo og in tani ay tahay wax ku shaqeeya, awoodaan in ay gacantayda mar kale isticmaali anna waxaan noqon doonaa. Haatan, waa kaliya in goob caafimaad, laakiin dad ku filan oo shaqo ku dul, iyo dareenka ku filan, waxay noqon kartaa wax aan u isticmaali kartaa meel ka baxsan isbitaalka, at gurigayga oo aan guriga ka baxsan, oo run ahaantii loo hagaajiyo tayada noloshayda,"Ayuu yiri.
Burkhart sameeyaa dhaqdhaqaaqa ugu horeysay oo isticmaalaya fikirrada oo keliya in 2014, laakiin waxa uu tan iyo markii uu ka bartay falalka dheeraad ah oo adag oo ay gacanta more sax ah uu gacanta iyo faraha badan. Faahfaahinta natiijooyinka ugu dambeeyay waxaa la daabacay Nature.
software Gaarka ah waa inay awoodaan inay aqrisan fikirrada Burkhart iyo iyaga badalo galay signallo koronto oo gacanta ugu jira, Goldogob dareemayaasha burburay ee uu lafdhabarta
"Waxa ay aheyd la yaab leh la joogo kooxda,"Ayuu yiri Ali Rezai, qofkale oo a at Wexner Ohio State ee Medical Center, dib dhaqdhaqaaqa gacanta ugu horeysay ee Burkhart. Laakiin waqtiga, uu gacanta loo oggol yahay dhaqdhaqaaqa asaasiga ah oo keliya. "Dhowr ilbiriqsi ka dib markii amankaag ah, annaguna waxaannu kugu nidhi OK, waxaan leenahay shaqo ka badan in ay halkan ku samaynayaan. "Kooxda ayaa qarka u saaran inay ka shaqeeyaan on jeestay dhaqdhaqaaqa xunxunna galay saxda ah, falalka waxtar leh.
Chad Button, kuwaas oo ka caawiyey abuuro qalab, ayaa sheegay in baadhitaanka lagu calaamadeeyay markii ugu horeysay ee qof qaba curyaannimo nool ayaa dib u dhaqdhaqaaqa la isticmaalayo calaamadaha gudaha ka maskaxda lagu duubay. "Waxaan u malaynayaa in ay tani tahay natiijo muhiim ah sidii aynu isku dayaan iyo waddada loogu xaaro bukaanka kale mustaqbalka, ma ahan oo keliya kuwa dhaawacyo lafdhabarta, laakiin sidoo kale kuwa soo maray stroke a, oo dhaawaca maskaxda laga yaabo xataa argagaxa leh,"Ayuu yiri.
"Ma hubin haddii arrintaasi tahay suurtagal,"Button daray. "Ma aha oo kaliya ahaayeen waxaan awoodi si aad u ogaato calaamadaha ee maskaxda ku jira kuwa iyaga iyo rayi dhaqdhaqaaqooda farta shaqsi, laakiinse waxaannu ahayn inay awoodaan inay link calaamadaha kuwa muruqyada Ian iyo oggolaadaan nooca in dhaqdhaqaaqa inay dib u soo noqon. Tani waxay muhiim u tahay hawlo maalmeedka, sida quudinta, iyo bukaanka ay awoodaan in ay iska. "
Cilmibaadhayaasha ayaa hadda eegaya ciidan ee horumar in ka Yeelo nidaamka dheeraad ah oo la qaadan karo oo suurtagal ah si ay u isticmaalaan ka baxsan isbitaalka. signalada maskaxda gaaray by-galaha kara laga yaabaa in wirelessly diray in computer ee processing, iyo wixii ka dambeeyey in ay gacmo dhudhun in ay kicin muruqyada. horumar kale arki karin electrodes dheeraad ah ku daray in ay jab maskaxda, sidaas calaamadaha ugu khiyaano lagu ogaan karaa oo maray in muruqyada bukaanka.
"Toban sano ka hor waxaan this ma uu samayn karin. Bal qiyaas waxa aannu ku samayn kartaa in 10 kale, "ayuu yiri Rezai.
Nick Annetta, injineer koronto on kooxda, ayaa sheegay in kooxda la shaqeeya si ay u sameeyaan nidaam yar oo waxtar u leh kala duwan oo ballaadhan ee bukaanka. "Tani ayaa laga yaabaa in la mariyo naafada kale motor, ma ahan oo keliya dhaawacyo xangulaha,"Ayuu yiri. "Waxaan u malaynayaa in this waa uun bilowga."
nooca New dhagaxa moon helay by dayaxa Chinese ...
Sidee in ay dhagaystaan (iyo tirtirto) everything you’...
Ugu halista badan si ay Humanity Kaalay From Technolo ...
22884	10 Qodobka, Disability, Features, Caafimaadka, Ian Sample, cilmi Medical, Neuroscience, Ohio, Science, Society, Technology, UK Science, US news, news World
← SE vs iPhone. iPhone 6S [VIDEO] Europe v Google: Sidee Android noqday dagaal ah →